Android-x86 9.0-r2 ikozvino yavapo, ine kernel yakagadziridzwa | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mana mushure previous versionIsu tatova nechikamu chitsva cheiyo desktop vhezheni yeGoogle's mobile operating system. Ndezve android-x86 9.0-r2, yechipiri yakagadzika vhezheni yeiyi nhevedzano yakasvika isina nhau dzinotyisa, asi izvo zvinosanganisira zvimwe zvakaita seyakagadziridzwa kernel. Kuti ive yakanyanya kutaurwa, iyo nyowani vhezheni yekernel iyo yavakaisanganisira iLinux 4.19.110 LTS, zvinoreva kuti ichave inotsigirwa, mukufunga, kwemakore matanhatu.
Imwe yedzakakurumbira misiyano yakave yakataurwa mu kusunungura chinyorwa ye Android-x86 9.0-r2 ndeyekuti vane gadzirisa nyaya ine chekuita nekukona kubhuroka pasi peEFI kubva kuIO. Chaizvoizvo, isu hatisi kutaura nezve yakakosha kuburitswa, uye zvishoma kana isu tichifunga kuti ivo vakangotaura izvo zvina zvakasarudzika shanduko iwe dzawakaunganidza mushure mekucheka.
Zvakajeka zve Android-x86 9.0-r2
Yakagadziridzwa kuve inoenderana neazvino Android 9.0.0 Pie, inowirirana Android-9.0.0_r54.
Yakagadziridzwa kernel ikozvino ichienda kuLinux 4.19.110 LTS kernel.
Yakagadzirisa dambudziko rakatadzisa kutanga iyo ISO muEFI mode.
Yakagadzirisa dambudziko reodhiyo paMicrosoft Surface 3.
Android-x86 kwete yepamutemo desktop desktopNaizvozvo, kana tikasarudza kuiisa paPC yedu, tinofanirwa kuziva kuti tinogona kukundikana. Kana isu tichingoda kuita bvunzo kana kushandisa yakatarwa chirongwa, zvakanakisa kuti isu tinoiisa mune imwe chaiyo muchina software, iyo yandinokurudzira GNOME Mabhokisi. Kana tichinetseka kuisa system, tinogona kugara tichishandisa iyo Live Session yatisingazovhare, isu tinongomira.
Vashandisi vanofarira vanogona kurodha zvifananidzo zvitsva kubva ku fosshub (link) uye kubva osdn.net (link). Iyo 64-bit vhezheni ine huremu hweanopfuura kungopfuura 900mb, nepo yakajairwa kana 32-bit inorema kupfuura pamusoro 720mb. Kana iwe ukaedza iyo nyowani vhezheni, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android-x86 9.0-r2 ikozvino yavapo, iine kernel yakagadziridzwa uye UEFI boot mhinduro